Ma rabtaa inaad xoqdo xogta webka? Jaraa'idku wuxuu soo bandhigayaa Barnaamijka Kumbuyuutarka Macmiilka ee lacag la'aan ah
Macluumaadka laga helayo website-yada waa farsamo adag oo u shaqeeya shirkado kala duwan. Ururada raba in ay ururiyaan xogta maadooyinka qaarkood ayaa ka faa'iideysan kara barnaamijyada soo socda:
Gawaarida waa kormeerka Chrome oo leh qaabab ballaaran oo ballaaran. Ma aha oo kaliya waraaqaha waraaqaha ah laakiin cilmi-baadhiye muhiim ah. Ma aha qalab aad u sareeya oo xariif ah ku dhejinaya xogtaada Google Spreadsheets. Xogtaada waxaa lagu daabici doonaa oo lagu kaydin doonaa xisaabteeda, iyada oo loo mahadcelinayo OAuth. Gawracatadu waxay u fiican tahay barnaamijka iyo kuwa aan barnaamijka ahayn.
Web Harvestku wuxuu la yimaadaa qaabab kala duwan oo kontarooli ah waana barnaamij weyn oo laga helayo ilaha xogta. Waxay ku qoran tahay Java waxayna ururinaysaa xogta laga helo bogagga shabakadda aasaasiga ah iyo kuwa sare. Webka Waweyn waxay badi bartilmaameedsadaa bogagga internetka ee XML ama HTML.
Dareemidda ayaa weli ah cajalad kale oo cajiib ah qalab wax lagu duubo . Waa qaab nidaamsan oo buuxa oo leh daraasado kala duwan iyo ikhtiyaari. Gaadiidku si dhakhso ah ayey u shaqeeyaan oo waxay kuu soo gudbiyaan qaababka macluumaadka ee la doonayo. Waxaa loo isticmaali karaa oo kaliya marka aad ku rakibtay Python qalabkaaga. Waxaa intaa dheer, waxaad u baahan tahay inaad faham asaasi ah ku yeelatid luuqada barnaamijka.
OutWit waa mid ka mid ah barnaamijyada soo dejinta iyo ugu faa'iidada badan ee xogta. Waa Firefox extension iyada oo ay jiraan waxyaabo badan oo laga soo saaro xogta. Dhibaatadu waxay sahlaysaa baaritaankaaga internetka waxayna kaa caawineysaa inaad si toos ah boggaga internetka ula socoto.
6. Qalabka Macluumaadka
Toolbar Data wuxuu automatajin karaa habka kaydka xogta ee sahlan. Haddii aad raadineyso inaad xog ururiso boggaga internetka ee kala duwan oo ubaahan macluumaadka mawduuca, waa inaad isku deydaa Data Toolbar.
Nooca ugu fiican ee iMacros waa in uu automati karo shaqooyinka soo noqnoqonaya. Haddii aad rabto inaad isticmaasho Firefox ama Google Chrome, iMacros waxay taageertaa dhamaan daalacashada waxayna kaa caawineysaa inaad ku socoto tiro badan oo bogag ah. Waxaa intaa dheer, waxay kaa caawineysaa in aad beddesho miisaska iyo liisaska macluumaadka loo adeegsado.
Tani waa barnaamij ka saarista macluumaadka ku salaysan browser kaas oo u shaqeeya sida Outwit iyo Import. io. Google waraaqaha shabakada waxaa loogu talagalay in laga soo saaro xogta labada faylka iyo faylasha PDF. Waa inaad muujisaa xogta aad u baahan tahay, qalabkani wuxuu ku siin doonaa nuqullo aad doonayso saacad. Waxaad ku kaydin kartaa xogtaada Google Drive.
Soo-saariddu waa barnaamij cusub oo hagaagsan oo la yaab leh kaas oo ay ku shaqeeyso teknolojiga barashada mashiinka. Waxaad barnaamijyo ka dhigi kartaa barnaamijka API-ga, waxaadna ku baran kartaa boggaga oo dhan daqiiqado gudahood Source .